၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အသေးစား ဓာတ်အားစနစ်နှင့် တစ်အိမ်သုံး ဆိုလာစနစ်ဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင?? - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅
၂ဝ၁၈- ၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အသေးစားဓာတ်အားစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာ ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်နှင့် တစ်အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော် အိမ်ထောင်စုပေါင်း တစ်သိန်းကျော်အတွက် ကျေးလက်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်လျာထားကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူကပြောကြားသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေစကြိုမြို့နယ် သံပြားချောင်း ကျေးရွာတွင်ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်း၏ အသေးစားဓာတ်အားစနစ် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲတွင် ယင်းကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
National Electricfication Project ကို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဝန် ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုပြီး မဟာဓာတ်အားမရှိနိုင်သည့်ဒေသများ၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ၁ဝ မိုင်အထက် ဝေးကွာသောဒေသများ ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေထည့်ဝင်နိုင်ခြင်းရှိသည့်ကျေးရွာများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း တစ်အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာပေါင်း ၄ဝ၇၄ ရွာ အိမ်ထောင်စု ၂၃ဝဝဝဝ ခန့်နှင့် အများပြည်သူပိုင်အဆောက် အအုံ ၃ဝဝဝဝ ကျော်တို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
”၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၂၁ ခုနှစ် အထိ ပထမငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလအတွင်း အိမ်ထောင်စုပေါင်း ခြောက်သိန်းခန့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ လျာထားလျက်ရှိရာမှာ အသေးစားဓာတ်အားစနစ်နဲ့ ကျေးရွာပေါင်း ၃၅ဝ ခန့်က အိမ်ခြေ ၃၅ဝဝဝ ခန့်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်”ဟု စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သူကပြောသည်။ သံပြားချောင်းကျေးရွာတွင်လည်း ကျေးရွာပြည်သူ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ၃၉ ကီလိုဝပ်ဆိုလာအသေးစားဓာတ်အားစနစ်၊ အရန်ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၄ဝ ကီလိုဝပ်တို့တပ်ဆင်ကာ သံပြားချောင်းကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စားသုံးရန် မသင့်သော စားသောက်ကုန်များကို အောင်လံမြို့နယ် ဈေးကွက်အတွင်း သိမ်းဆည်းနေ
အင်းလေးကန် ရေရှည်တည် တံ့ရေးအတွက် ဒေသခံကျေးရွာပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့များ တိုးချဲ့ ဆောင်??
၁၁၅ မိုင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ ပိုင်အိုးနီးယားစားသောက်ဆိုင် ဝန်ထမ်းအဆောင် မီးလောင်မှုဖြစ်
ဆမ်ဆောင်းကုမ္ပဏီ၏ ကင်ဆာဆေးဝါးများ ဗြိတိန်တွင် စတင်ရောင်းချ